Chii chinonzi MailChimp uye zvinoshanda sei: makiyi ekuzvinzwisisa | ECommerce nhau
Chii chinonzi MailChimp uye zvinoshanda sei
Iwe pamwe wakanzwa nezveMailChimp. Zvichida imhaka yekuti iwe wakafunga nezvekuishandisa kuchitoro chako chepamhepo; pamwe nekuti iwe unogamuchira maemail uko, pazasi, ivo vanokuzivisa iwe kuti chishandiso ichi chinoshandiswa. Kana pamwe nekuda kwezvimwe zvikonzero.
MailChimp rave rinodikanwa yedhijitari chishandiso chevazhinji kutumira matsamba kune nhamba huru yevanyoreri. Asi unoziva here kuti chii? Chinoshanda sei? Kana ino inguva yako yekutanga, kana kuti iwe wakambozviedza asi zvisina kujeka kwauri, ikozvino unogona kuzvinzwisisa.
1 Chii chinonzi MailChimp
3 Maitiro ekugadzira iyo MailChimp account
4 Mashandisiro ekushandisa chishandiso kukambani yako
4.1 Maitiro ekugadzira runyorwa rwekutaurirana muMailChimp
4.2 Maitiro ekupinza rondedzero yevanyoreri muMailChimp
4.3 Maitiro ekugadzira email
Chii chinonzi MailChimp
MailChimp iri chaizvo chishandiso chaunogona kushandisa kuita email kushambadzira mishandirapamwe. Iyi mishandirapamwe yakakosha nekuti inokubatsira kubatana nevateveri vese vauinazvo, panguva imwe chete iyo yaunotumira zvaunopa, zvidzikiso, kana email chete kune avo vanhu vanoumba runyorwa rwevateveri vauinaro.
Uye zvakare, inova chinhu chine simba kwazvo, nekuti unogona kugadzira, kutumira uye kuziva kuti zvinokanganisa maemail ako ndezvipi. Semuenzaniso, fungidzira iwe uchitumira imwe ichiti iro bhizinesi rakavharirwa mazororo. Uye kukanganisa kuri 1%; Zvinorevei? Kuti panenge pasina munhu akateerera iyo email. Pane kudaro, iwe unotumira imwe ichiti chitoro chako chinopa 50% dhisikaundi pane zvese; Zviripachena kuti kukanganisa kwacho kuchave 70% (kana 30, kana 100%, haamboziva). Uye zvinoreva kuti ichabudirira.
Chokwadi, hazvigoneke kuziva kana email neemailChimp ichabudirira kana kwete, asi inokupa iwe manhamba ayo achakubatsira iwe kuziva kana izvo zvaunoita zvichinyatsoita kana kana uchifanira kushandura kuti unyatsosimudzira bhizinesi rako. .
Unofanira kuziva izvozvo MailChimp ine shanduro mbiri, iyo yemahara uye yakabhadharwa imwe. Iyo yemahara account inokutendera iwe kutumira 12.000 maemail pamwedzi, asi chete kune zviuru zviviri zvekutaurirana. Kune chikamu chayo, iyo yakabhadharwa account ine zvimwe zvakanaka (semuenzaniso, ivo autoresponders, inova iko otomatiki kutumira emaimeri; kana iyo inokonzeresa, iyo inoreva kutumira maemail nezve chimwe chiitiko), asi kana iwe ukasasvika kune avo zviuru zviviri zvekutaurirana, hazvina kukodzera kubhadhara izvo zvekuwedzera kune mashoma mabhenefiti.
Kuenderera mberi neyecheteyo MailChimp theme, iwe unofanirwa kuziva kuti chishandiso ichi chinoshandisa zvakawanda. Kwete chete iyo inochengetedza manejimendi tsamba dzinotumirwa, asi zvakare inokwanisa kuitevera.
Uyewo, haina kungoshanda chete kuchitoro chepamhepo. Zvakare kumabhizinesi anoita nzvimbo pamapeji avo apo vashandisi vanogona kunyoresa nekusiya yavo email. Chikonzero ndechekuti dhatabhesi hombe iri rinokutendera kuti ubatanidze nevanhu vese ivavo. Asi kuzviita imwe neimwe hazvisi izvo zvakanakisa (zvinotora nguva yakareba uye zvakare maemail anogona kufunga kuti vari kutumira Spam nekutumira zvese zvaunotumira kune iro folda (iro pachokwadi hapana munhu anoona).
Asi kwete izvozvo chete, MailChimp ichakubatsira iwe kugadzira mafomu pane yako blog, kutevedzera antispam mitemo, kuita bvunzo, kana kuita zvemukati hutachiona. Uye zvakanyanya kupfuura chete nyanzvi mune ino turu dzinokwanisa kuwana.
Nenzira iyi, the zvakanakira MailChimp Nekuremekedza tsamba yechinyakare yavari:
Kugona kuyera mhedzisiro yemushandirapamwe wega wega.
Gadzira maemail akagadzirirwa uye akagadzirwa anokwezva kutariswa.
Tevera mhinduro yemugashiri (semuenzaniso, kana ivo vakavhura iyo email, kana ivo vakadzvanya pane iyi link, kana vakaibvisa zvakananga ...).
Maitiro ekugadzira iyo MailChimp account
Usati watanga kufunga nezvekuti uchaendesa sei maemail kune vako vanonyorera, kana mhando yemushandirapamwe wauchazoita, zvakakosha kuti unyore uye upedze zvese Matanho ekuti uve neMailChimp account.
Kuti uite izvi, danho rekutanga iwe raunofanirwa kuita kuenda kune iro repamutemo peji rechishandiso, https://mailchimp.com/.
Kamwe ipapo, unofanira tinya "Sign Up Free". Isa data rako muchimiro, pamwe ne password yauri kuzoshandisa. Izvi zvinokutumira iwe email kuti uone kunyoresa kwako. Iwe unofanirwa kudzvanya pane "Activate Akaunti" bhatani.
Panguva iyoyo, skrini nyowani ichavhura mauri uchafanirwa kuzadza rumwe ruzivo: ruzivo rwemunhu, zita rekambani, kero, kana iwe wakatumira chimwe chinhu, kana uine social network uye uchida kuzvibatanidza ... nguva, iwe uchagamuchira email inokugamuchira iwe uye ichikupa iwe bhuku rekubatsira kuitira kuti iwe ugone kunzwisisa chishandiso, chishandise nemazvo uye, pamusoro pezvose, dzidza hunyengeri hwekushandisa kwayo.
Mashandisiro ekushandisa chishandiso kukambani yako
Kushandisa MailChimp zvakanaka haisi nyaya yemaawa, anenge mazuva, nekuti rairo yakanaka kwazvo yatinogona kukupa iwe kuverenga zvakawanda nezve chishandiso kuti uwane zvakazara mairi. Naizvozvo, isu tave kuzokusiira iyo huru mashandisiro ainayo uye nemabatiro aunofanira kuzviita.
Maitiro ekugadzira runyorwa rwekutaurirana muMailChimp
Kugadzira rondedzero yekubatana kwakakosha nekuti ndiani wauchazotumira maemail ako ipapo? Naizvozvo, iwe unofanirwa kufunga nezve iyi nhanho huru. Kuzviita, Iwe unofanirwa kuve wakajeka nezve mhando yemutengi iwe yauri kuzogadzirisa. Semuenzaniso, haugone kugadzira yevana matoyi rondedzero nevanhu kana vashandisi vasina vana.
Paunenge iwe uri muMailChimp, iwe unofanirwa tinya pane Lists chikamu, ndipo panogadzirwa runyorwa. Ikoko iwe uchaona, kurudyi, bhatani diki rinoti Gadzira Rondedzero. Enderera mberi.
Iye zvino uchafanirwa kuzadza peji ine ruzivo, ndiko kuti, zita rezvinyorwa, ndeipi email yauchazoshandisa kutumira kune iyo runyorwa, uye chii chichava iro zita remutumiri. Dzimwe nguva, iwe unogona kuisa chikonzero nei vakanyorera kune iro runyorwa, pamwe nekuramba uchifunga kuti vanogona kudzimwa pairi.
Kana zvese zvangoitwa, tinya Sevha uye iwe unenge uine rako rekutaurirana runyorwa.
Maitiro ekupinza rondedzero yevanyoreri muMailChimp
Zvinogona kunge zvakadaro Iwe unotova neanonyora zvinyorwa uye haudi kuisa maemail rimwe nerimwe kuMailChimp. Muchiitiko ichocho une sarudzo dzinoverengeka dzekupinza. Akazviita sei? Zvakanaka unogona kuzviita:
Kubva kuCSV kana gwaro remavara.
Kana kubva kunyorera seGoogle Drive, Zendesk, Eventbrite ...
Maitiro ekugadzira email
Unotova nezvakanyorwa. Zvino bata ita email yaunoda kuti vanhu vaunyorera kuti vagamuchire. Kuti uite izvi, unofanirwa kuenda kumisasa. Uye kubva ipapo kuenda kubhatani riri kurudyi, Gadzira Campaign.
Iye zvino, mundima yekutsvaga iwe unogona kuwana akasiyana matemplate matemplate anogona kuuya anobatsira, sekugamuchira vatsva vatsva, kana kuyeuka kuti wakasiya ngoro muchitoro chako chepamhepo. Kune zvakare yekutenda ...
Paunenge uchinge uinazvo, unofanirwa kupa mushandirapamwe wako zita, pamwe nerondedzero yaunoda kugamuchira iyo email. Uye iwe rova ​​Kutanga.
Tevere, inguva yekugadzira iyo email. Izvi zvinoitwa muKugadzira Email (kurudyi), kwaunofanirwa kuzadza ruzivo rwakakumbirwa.
Tevere, iwe unofanirwa kusarudza template yeiyo email, iyo inoenderana neako kuravira. Unogona kuitarisa, saka iwe unongofanirwa kutungamirwa nebhizinesi rako uye nekwauri kuda kupa.
Ehezve, iwe unogona kugadzirisa zvinyorwa, mifananidzo, uye chero chaunoda.
Zvakakosha, gara uchiwedzera mukana wekudzima kunyoreswa, nekuti ikodzero yemushandisi. Uye mumwezve mupiro, edza kuti zvese zviri mumutauro wakakodzera. Ndokunge, kana iwe ukataura nevashandisi vanobva kuSpain, muchiSpanish (kusanganisira tsoka); asi kana vari Chirungu, zvirinani zvese zvinyorwa muChirungu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Email marketing » Chii chinonzi MailChimp uye zvinoshanda sei
Chii chinonzi Evernote uye kuti ingakubatsira sei